10 -ka Dhakhtar ee ugu Mushaharka Badan Caalamka & Qiimaha ay Heli karaan | 2021
Bogga ugu weyn 10 -ka Dhakhtar Ee Ugu Mushaharka Badan Caalamka | 2021
Ma rabtaa inaad noqoto dhakhtar? Ma la yaaban tahay haddii aad noqon karto milyaneer ka shaqeeya dhakhtar ahaan? Hubaal, waad awoodaa. Waxaa jira dhakhaatiir badan oo adduunka oo dhan ah oo hanti weyn ka sameeyay xirfadda. Sahami Dhakhaatiirta ugu Mushaarka Badan Adduunka.
Sida laga soo xigtay sahan ay sameeyeen shakhsiyaadka qaarkood, 85% carruurtu waxay ereyga si geesinimo leh u odhanayaan “waxaan rabaa inaan dhakhtar noqdo” iyagoo laabta ka maqan. Markii la weydiiyay sababta ay jawaabtoodu tahay 'Waxaan rabaa inaan badbaadiyo nolosha dadka.
Florina Litus, Qalinjabiyaha caafimaadka ee ugaarsiga ah 2017 "Qaar ayaa u arka in daawadu ay ka badan tahay xirfadda oo kaliya, ee ay tahay wicitaan. Si aad u noqoto dhakhtar, waxaad u baahan tahay inaad yeelato dhiirigelin iyo dhiirigelin kugu riixaysa sannadaha waxbarasho iyo bannaanka isbitaalka”.
Cadaadiska ahaanshaha shaqaale caafimaad ayaa qaadanaysa awood aad u culus maadaama lagaaga baahan yahay inaad bulshada siiso sida ugu wanaagsan ee adeegyadaada. Inta badan iskuulada caafimaadka aduunka waa barnaamijyo afar sano ah si kastaba ha ahaatee, qaarkood waxay bixiyaan shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo dugsiga caafimaadka lix ilaa todoba sano.
Ardaydu waa inay ku aflaxaan Imtixaanka Ogolaanshaha Kuliyada Caafimaadka oo ay arji aad u fiican u gudbiyaan dugsiga laga rabo. Gelitaanka dugsiyada caafimaadka waa mid aad u tartan badan maadaama ay u baahan yihiin imtixaanka aqoonta iyo xirfadaha gaarka ah.
Waa Maxay Dhammaan Noocyada Dhakhaatiirta Ee Kala Duwan?
Goobta caafimaadku waa goob ballaadhan, oo qabata tiro xirfado ah. Si ka duwan sida beeraha kale, dawadu waxay leedahay laamo mid kastana waa u muhiim bani aadamka. Qaar ka mid ah kuwan waa:
Bixiyeyaasha Daryeelka Koowaad
Dhakhtarka Raadiyaha Urologist
Qalliinka Caaga ah
Takhasuslayaasha Cudurrada faafa. Dhab ahaantii. com
Haddii aad rabto in aad khabiir ku noqoto goobtaada oo aad hesho mushahar fiican, ka dib tag mid ka mid ah dugsiyada ugu fiican aduunka.
Waa Maxay Mushaharka Bilowga ah ee Dhakhaatiirta USA?
Mushaharka celceliska qaranka ee Dhakhtarka Caafimaadka waa $ 1,77,190 gudaha Mareykanka. GlassDoor . Si kastaba ha ahaatee, celceliska mushaharka gelitaanka ee dhakhaatiirta caafimaadku way kala duwan yihiin. Qaar ka mid ah arrimahan ayaa ah asalka waxbarasho, xirfado gaar ah oo la gaarey iyo Doorashada machad caafimaad.
Intee in le'eg ayuu sameeyaa Dhakhtarka ugu Wanaagsan Adduunka?
Sida laga soo xigtay Dhex-dhexaad , Takhasuska ugu mushaarka badan 2020 waa lafaha, iyadoo celceliska magdhowgu yahay $511,000. Laamaha kale ee goobta caafimaadka ee bixiya wax ka badan khidmadda mudan waa qalliinka neerfaha, Qalliinka Maqaarka Caaga, iyo Kansarka.
Waa Kuma Dhakhtarka Qaliinka Ugu Lacagta Badan Adduunka
Cilmi baaris uu sameeyay degreequery.com Bukaannada la ildaran xanuunnada maskaxda la xiriira, dhakhaatiirta Neurosurgeon ayaa ilaa hadda ah takhaatiirta ugu mushaharka badan adduunka khibraddooda iyo khibraddooda maskaxda iyo qaybo macquul ah oo jirka ah.
10 dhakhtar oo ugu mushaharka badan dunida 2021 -ka.
Patrick Soon Shiong Net Worth ee 2021 oo ah $ 13 Bilyan
Thomas Frist Net wuxuu qiimihiisu yahay 2021 $ 9.1 Bilyan
Philip Frost Net Worth ee 2021 oo ah $ 4.9 Bilyan
.Gary Michaelson Net Worth ee 2021ka $ 1.6 Bilyan
James Andrews Net Worth ee 2021 oo ah $ 100 Milyan
Terry Dubrow Net Worth ee 2021 oo ah $ 30 Milyan
Leonard Hochstein Net Worth ee 2021 ee $ 20 Milyan
Robert Rey Net Worth ee 2021 oo ah $ 15.5 Milyan
Garth Fisher Net Worth ee 2021 oo ah $ 15 Milyan
Paul Nassif Net Worth ee 2021 oo ah $ 14 Milyan.
Patrick Soon Shiong, oo loo yaqaan dhakhtarka ugu weyn dunida wuxuu dhashay 1952, 29kii July. Waa Dhakhtar Ameerikaan ah oo ku dhashay Afrika, cilmi baare iyo bare.
Markii uu jiray 23 sano, wuxuu shahaado ka qaatay Daawada iyo Qalliinka Jaamacadda Witwatersrand. Magaalada Johannesburg, wuxuu ku dhammeystay Tababbarka Caafimaadka ee Isbitaalka Guud. Waa Dhakhaatiirta ugu Mushaharka Badan Caalamka.
Thomas Frist, oo ah ninka ugu qanisan Tennessee iyo, sidoo kale ka mid ah Dhakhaatiirta ugu Mushaharka Badan Caalamka. Wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Washington ee St. Louis oo haysta shahaadada MD. Wuxuu bilaabay Shirkadda Isbitaalka Mareykanka, oo u adeegta kumanaan qof maalin kasta.
Frist wuxuu xubin ka ahaa Guddiga Agaasimayaasha muddo kow iyo toban sano ah IBM. Wuxuu hadda u shaqeeyaa madaxweynaha Florida INC ee Galen iyo Okeechobee Hospitals INC.
Philip Frost wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka Sanadkii 1936. Sannadkii 1961 -kii, wuxuu shahaadada MD ka qaatay Kulliyadda Caafimaadka Albert Einstein. Intii lagu jiray adeeggiisa, wuxuu wakiil ka ahaa dhowr urur wuxuuna hubiyay inay gaareen Zenith. Sidoo kale waa Ganacsade Maalqabeen ah waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid yahay Dhakhaatiirta ugu Mushaarka badan Caalamka.
Gary Michaelson wuxuu ka mid yahay Dhakhaatiirta Mushaharka ugu fiican Adduunka. Waa dhakhtar laf -dhabarta laf -dhabarta oo ay aqoonsatay Guddiga Mareykanka. Sidoo kale waa samafale iyo hal -abuur.
Si diirada loo saaro samafalka, wuxuu ku shaqaynayay qalliin laf -dhabarka in ka badan 25 sano ka dibna wuu ka fariistay shaqadii gaarka ahayd. Sannadkii 2005, in ka badan $ 1 bilyan, wuxuu ka iibiyey qaar badan oo ka mid ah shatiyadii la xiriira laf-dhabarta Medtronic
James Andrews waa mid ka mid ah Dhakhaatiirta ugu qanisan Adduunka. Waa dhakhtar caan ah oo Mareykan ah oo qalliinka lafaha ah kaas oo sameeyay hal milyan isagoo sameeyay qalliinnada xiddigta isboortiga. Wuxuu ku takhasusay sinta, jilibka, iyo xusulka.
Dr. Andrews waa aasaasaha aasaaska machadka daawada Isboortiga Mareykanka (ASMI), oo ah urur aan macaash doon ahayn oo u heellan cilmi baarista daawada lafaha iyo isboortiga, waxbarashada, iyo ka hortagga dhaawaca.
Wuxuu caan ku yahay shaqadii Dr.paul Nassif ee Swan iyo wada-shaqaynta Botched. Maadaama uu yahay qalliin caag ah oo macquul ah, wuxuu sumcad u yeeshay naftiisa wuxuuna ka dhex muuqday dhakhaatiirta ugu qanisan Adduunka.
Wuxuu kaloo abuuray barnaamij TV oo loo yaqaan Bridalplasty, halkaas oo koox haween ah ay ku tartamayeen inay ku guuleystaan ​​nidaamka qalliinka caagga ah ee guurka iyo isbadalka.
Wuxuu ku takhasusay qalliinnada naasaha, kor u qaadidda wejiga, iyo hagaajinta jirka. Wuxuu ku dhashay Moscow bishii Juun 18, 1966, wuxuuna ahaa dhakhtar in ka badan 15 sano.
Maanta, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah dhakhaatiirta qalliinka badan ee Miami wuxuuna sameeyay in ka badan 10,000 oo qalliin, iyo sidoo kale inuu ka mid yahay Dhakhaatiirta ugu mushaharka badan Adduunka
Robert Miguel Rey Junior, oo dhashay Oktoobar 1,1961 waa dhakhtar qaliin caag ah oo reer Brazil ah. Wuxuu shahaadada farmashiyaha ka qaatay Jaamacadda Arizona State University 1983.
Sannadkii 1990, wuxuu ka qaatay shahaadada masterka ee xiriirka dadweynaha Harward's John F, Dugsiga Dawladda ee Kennedy iyo Ph.D. ee Caafimaadka ee Jaamacadda Tufts ee Caafimaadka.
Wuxuu ku dhammaystay saddexdii sano ee Internship-ka Harbor UCLA qalliin guud, waxaa ku xigay laba sano oo deggenaansho ah Jaamacadda Tennessee Memphis Health Science Center qalliin caag ah 1997kii.
Garth Fisher waa dhakhtar qalliin caag ah oo fadhigiisu yahay Ameerika. Waa dhakhtarkii ugu horreeyay ee loo doorto barnaamij telefishan oo la dabaaldegay oo la yiraahdo Extreme Makeover. 1980, wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Mississippi wuxuuna qaatay shahaadada MD 1984.
Markii dambe wuxuu ku dhameystay tababarkii Jaamacadda California ee Irvine. Waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dhakhaatiirta qaliinka balaastigga ee ugu weyn dunida.
Paul Nassif, Dhakhtarka Qaliinka caagga ah ee caanka ah ee Maraykanka, iyo shakhsiyadda telefishanka, wuxuu dhashay 6dii Juun 1962. Wuxuu ku takhasusay qalliinka wejiga caagga ah, oo loo yaqaan rhinoplasty.
Wuxuu ka qalin -jabiyay Jaamacadda Koonfurta California School of Medicine 1922. Sannadkii 1998 -kii, Jaamacadda St.Louis School of Medicine, wuxuu ku dhammaystay wehelnimada balaastigga wejiga iyo qalliinka dib -u -dhiska.degreequery.com iyo Webspycam
Maalmahan, Inaad noqoto dhakhtar ma sahlana maadaama beertu tahay daraasad tartan ah. In badan oo cilmi -baaris ah, wax -barasho ayaa ku jirta xirfadda marka loo eego kuwa kale. Sidoo kale, ka shaqaynta saacad walba waxaa loo arkaa inay tahay hawl culays ku ah beeraha kale laakiin goobta caafimaadka, waa loo baahan yahay.
Siyaabaha dhakhaatiirta loo dhiso ayaa ka baxsan dunidan maadaama mar walba laga xayuubiyay waxyaalo badan sida nolosha bulshada, Isugeynta Qoyska, iyo gaar ahaan daqiiqado gaar ah oo khuseeya noloshooda laakiin weli, mar walba waa noo jiraan. Runtii nasiib ayaan u leenahay inaan ku helno Dhulka.
hunimed.eu/news/graduate-ka koowaad-2017-waxa ay wadaagaan sheeko-dhakhtar-noqonaya/